Android အတွက်အကောင်းဆုံးအားကစားဂိမ်း ၁၀ မျိုး Androidsis
အ အားကစားဂိမ်းများ သူတို့သည်သုံးစွဲသူများအတွက်အကြိုက်ဆုံးအချို့ဖြစ်လာသည်။ ဂိမ်းစက်၊ ကွန်ပျူတာနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်ပါထည့်သွင်းပေးထားသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအားကစားဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် Android ထုတ်ကုန်များအတွက်။ ငါတို့မှာရွေးချယ်စရာတွေပိုများလာတယ်။
ထို့ကြောင့်, ငါတို့တစ် ဦး ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ Android အတွက်အကောင်းဆုံးအားကစားဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်စုစည်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအားကစားအမျိုးအစားများကိုရှာဖွေရန်ရွေးချယ်ခြင်း။ Android Device များရှိသည့်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုသူတို့နှစ်သက်တဲ့ဂိမ်းကိုရှာနိုင်မှာပါ။ ဤစာရင်းကိုစစ်ဆေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။
ကျနော်တို့အားကစားဂိမ်းများကိုစဉ်းစားသောအခါ, ဘောလုံးပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရရှိနိုင်သောအားကစားတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားအားကစားများအပေါ် အခြေခံ၍ အခြားအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ဂိမ်းများရှိသည်။ ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူထားခဲ့ပါ Android အတွက်အကောင်းဆုံးအားကစားဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ခြင်း။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီဂိမ်းအတော်များများဟာအခမဲ့ဖြစ်သည်.
3 Pro ကို Evolution ဘောလုံး 2021
4 EA ၏အားကစား UFC
5 Virtua တင်းနစ်စိန်ခေါ်မှု
6 ရီးရဲလ် Moto
7 Pro Feel ဂေါက်သီး
8 NBA Live မိုဘိုင်း
10 နှင်းလျှောစီးပါတီ: World Tour
ဤနယ်ပယ်ရှိဟဲဗီးဝိတ်များထဲမှတစ်ခုကျွန်ုပ်တို့စတင်သည်။ PES 2021 သည်ဤနယ်ပယ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးသောဂိမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများစွာအတွက်စမတ်ဖုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဘောလုံးဂိမ်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအများကြီးအားသာချက်များရှိပါတယ်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်မှသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်ကောင်းမွန်သည့်ဂိမ်းကစားခြင်း၊ ဖုန်းမျက်နှာပြင်၊ အသင်းများနှင့်ကစားသမားအမြောက်အများရွေးချယ်ခြင်းအထိဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးပြည့်စုံသောအသင်းကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ပြိုင်ပွဲများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ခပ်သိမ်းသောကာလ၌အလွန်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ၎င်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူမှုများနှင့်ကြော်ငြာများကိုတွေ့ရှိရသော်လည်း သူတို့သည်မသင်မနေရ ၀ ယ်ယူမှုများမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ငွေမပေးဘဲကစားနိုင်သည်။
သင်အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဆိုပါက ဘတ်စကက်ဘော, ထို့နောက်ဤဂိမ်းကိုသင်ရှာဖွေခဲ့ကြတ။ သင်သည်သင်၏အသင်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဘတ်စကက်ဘောလိဂ်, အ NBA ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဥရောပလိဂ်ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
အ ဂရပ်ဖစ်ကောင်းပါတယ်, ဂိမ်းဖျော်ဖြေမှုသည်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်.
NBA 2K မိုဘိုင်းဘတ်စကက်ဘောဂိမ်း
ရေးသားသူ: 2K, Inc
Pro ကို Evolution ဘောလုံး 2021
ဘယ်လို, မဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကျနော်တို့အခြားဘောလုံးဂန္နှင့်အတူစာရင်းဆက်လက် နှစ်ပေါင်းများစွာဗီဒီယိုခလုတ်များအောင်ပွဲခံခဲ့သည်။ PES Saga သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အောင်မြင်မှုကိုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင်ပါအောင်မြင်ရန် 2018 လူကြိုက်များသောဂိမ်းတွင်ရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။ သင်၏အသင်းကိုရွေးချယ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးလိဂ်ကိုအနိုင်ယူပါ သူနှင့်အတူ။
အကွောငျး ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများသည် Android အတွက်သုံးရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ ဂိမ်းအတွင်း ၀ ယ်ယူမှုများရှိသော်လည်းဂိမ်း၏ဒေါင်းလုပ်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
EA ၏အားကစား UFC
အတွက် အကောင်းတစ် ဦး တိုက်ပွဲများဂိမ်းချစ်သူများ ငါတို့သည်ဤ option ကိုရှာပါ။ ငါတို့သွားခဲ့တယ် ရောနှောကိုယ်ခံပညာ, ဒါကြောင့်သံသယမရှိဘဲကျနော်တို့ကဒီဂိမ်းထဲမှာအဆက်အသွယ်တွေအများကြီးနှင့်ကောင်းသောတိုက်ပွဲတွေရှိသည်လိမ့်မယ်။ သူတို့ကမင်းကိုတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။
ကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်တွေ၊ ငါတို့မှာဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့တိုက်လေယာဉ်အနည်းငယ်ကနေရွေးစရာရှိတယ်။ The ဂိမ်းကို Google Play တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သော်လည်း In- ဂိမ်းဝယ်ယူမှုရှိသည်ပါဘူး။
ငါတို့သွားခဲ့တယ် တင်းနစ်ဂန္။ ယနေ့ခေတ် Android ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်သည့် console များပေါ်တွင်လူသိအများဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သောအချိန်များတွင်သေချာပေါက်အများဆုံးကစားခဲ့သည့်ဂိမ်းတစ်ခု။ လက်ကိုင်ဖုန်းဗားရှင်းဟာသိပ်မပြောင်းဘူး။ မူရင်း၏အနှစ်သာရကိုထိန်းသိမ်းထားသည်.
ငါတို့ရှိသည် တစ်ယောက်တည်းဖြစ်စေ၊ ငါတို့သူငယ်ချင်းများနှင့် WiFi သို့မဟုတ် Bluetooth မှတဆင့်ဆော့ကစားနိုင်သည်။ ဂိမ်းမှာကြော်ငြာတွေရှိပေမယ့်အခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့လဲလှယ်ဖို့ဒီကြော်ငြာတွေကိုငါတို့ဖယ်ရှားပစ်နိုင်တယ်။
မော်တာဂိမ်း၏ဝါသနာရှင်? အထူးသဖြင့်ဆိုင်ကယ်။ ဒီဂိမ်းဟာကျွန်တော်တို့ဟာ Google Play မှာရှာတွေ့နိုင်မယ့်ဒီအမျိုးအစားအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင်တိုက်နယ်၌ရှိသကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၏ထို option ရှိသည် ဂိမ်းကစားနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ.
ငါတို့သည် အမျိုးမျိုးသောဂိမ်း Modes သာ။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုက်နယ်အများအပြားကိုသွားနိုင်လိမ့်မည်။ စာရင်းပေါ်ရှိအခြားဂိမ်းများကဲ့သို့ပင်, ဒေါင်းလုပ်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကကြော်ငြာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်, ကအတွင်းဝယ်ယူမှုရှိသည်။
ရေးသားသူ: Dreamplay ဂိမ်းများ
Pro Feel ဂေါက်သီး
ဂေါက်ကွင်းကိုပို့ပေးတဲ့စံပြဂိမ်းတစ်ခု။ ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းကဲ့သို့ကောင်းသောရိုက်ချက်များကိုရိုက်ခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလွယ်ကူဆုံးအရာမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ထိပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့သည် ကောင်းတဲ့ရိုက်ချက်ရဖို့အများကြီးလေ့ကျင့်ပါ။ ထို့အပြင်ကစားပွဲတွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ င်ရောက်ကစားရပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်ခက်ခဲစေလိမ့်မည်။
ငါတို့ရှိသည် တစ် ဦး တည်းကစားရန် option ကိုငါတို့လုပ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ဘယ်သူကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နိုင်တယ်။ The ဂိမ်း download ကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်ကျနော်တို့ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကိုကြော်ငြာများရှိပါတယ်။
Pro Feel ဂေါက်သီး - အားကစားခြင်း simulation
ဒါငါတို့ပဲ Android အတွက်အကောင်းဆုံးအားကစားဂိမ်းများဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သူအချို့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်မတွန့်ဆုတ်ပါ။
NBA Live မိုဘိုင်း
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဘတ်စကက်ဘောအသင်းတွင်လည်းဂိမ်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ထိုသူအားလုံးတွင်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်အသင်းကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်မှာရိုးရှင်းပြီးအခြားအသင်းများကိုအနိုင်ယူရမည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားဆုလာဘ်များစွာရရှိရန်ခွင့်ပြုထားသည့်ဖြစ်ရပ်များစွာပါရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့်တိုးတက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဂိမ်းကကျွန်ုပ်တို့အားလက်ရှိကစားသမားများကိုအချိန်မရွေးထပ်ထည့်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းအလွန် updated ထားရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းကို Android ပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ၎င်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝယ်ယူမှုနှင့်ကြော်ငြာများကိုတွေ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဘာမှပိုက်ဆံမပေးဘဲကစားနိုင်ပါတယ်။
ဂေါက်သီးသည်ယခင်အားကစားနည်းများကဲ့သို့လူကြိုက်များသောကစားနည်းမဟုတ်ပါ၊ အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုလူအများကပင်သံသယဝင်ကြသည်။ Play စတိုးကနေစီးရီးတွေရှာတယ် ဂေါက်သီးကစားနည်း Android အတွက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ထိုသူအပေါင်းတို့ထဲကအပြည့်စုံဒီခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်။ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောပြိုင်ပွဲများနှင့်လယ်ကွင်းများမှလှုံ့ဆော်ပေးသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကဂရပ်ဖစ်မှာတွေ့ရတဲ့အရာ၊, သောခပ်သိမ်းသောကာလမှာဂိမ်းသို့ရရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင်အခက်အခဲ variable ကိုဖြစ်ပါတယ်။ လေ၊ စိုထိုင်းမှုနှင့်အပူချိန်စသည့်ဂိမ်းများကိုလွှမ်းမိုးသောအကြောင်းရင်း ၇၀ ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးကတည်းက ဂေါက်သီးနှစ်သက်သူများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဂိမ်း။
ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ယခင်ဖြစ်ရပ်များတွင်ကဲ့သို့, အတွင်းဝယ်ယူမှုနှင့်ကြော်ငြာများရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကတစ်ခုခုအတွက်ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘဲကစားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က optional ကိုဝယ်ယူမှုဖြစ်ကြသည်။
နှင်းလျှောစီးပါတီ: World Tour
ဆောင်းရာသီအလယ်၌, သင်အကျော်ကြားဆုံးဆီးနှင်းအားကစားတစ်ခုအကြောင်းကိုဂိမ်းတစ်ခုလက်လွတ်မနိုင်။ Snowboarding သည်လူကြိုက်များသည်၊ အထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်များနှင့်ဖြစ်သည်။ ဤအားကစားနှင့် ပတ်သက်၍ ဂိမ်းအချို့ရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီသဘောနဲ့အပြည့်စုံဆုံးကတော့ဒီဂိမ်းကိုအခုငါတို့ပြောနေတာပါ။ ကျနော်တို့ထဲမှာအများအပြားဂိမ်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု Modes သာရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအလှည့်ကျတစ်ခုစီကိုအနိုင်ရဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက်ငါတို့လုပ်ရမယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလှည့်ကွက်များကိုဆွဲထုတ်ပါ၊ စုစုပေါင်း ၅၀ ထူးခြားသောလှည့်ကွက်များရှိသည်။ သူတို့နှင့်အတူ၎င်းတွင်ရှိသောအောင်မြင်မှု ၁၅၀ ကိုရယူပါ။
ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ တနည်းကား, ကျနော်တို့ကအတွင်းပိုင်းဝယ်ယူမှုနှင့်ကြော်ငြာရှာပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ကဘာကိုမှမပေးရဘူး၊
ရေးသားသူ: Maple Media - နှင်းလျောစီး၊ စကိတ်ဘုတ်နှင့်ပြိုင်ပွဲဂိမ်းများ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးအားကစားဂိမ်း ၁၀ မျိုး